Vista's Colorful Planet: Emmanuel ထံမှ ပေးစာ ... (ဇာတ်သိမ်း)
Ma Hninpwint Says:
ကောင်းလိုက်တာ..။ So touching !
အဲဒါ ကိုယ်တွေ့ ရေးထားတာကိုး။
ကလေးမလေးက အသွက်ကလေးပဲ..၊ သူတို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံတဲ့ climax မှာ သည်းထိတ်ရင်ဖို အဖြစ်ကနေ ထူထူအအ လူထွားကြီး တစ်ယောက်ကို လူမမယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက်က ဦးဆောင်သွားတဲ့ ပြုံးရွှင်စရာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်သွားတဲ့ အဲဒီ အလှည့်အပြောင်းလေးကို ကြိုက်တယ်၊း)
Emmanuel, အဲလက်ဇီ စတဲ့ နာမည်တွေကြောင့်လည်း ဘာသာပြန် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်နေရသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလှတယ်၊ သေချာတာက ညက်ညောလှတဲ့ အရေးအသားကြောင့် ရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်စိတ်နဲ့ အဆုံးရောက်တဲ့ အထိ လောဘတကြီး ဖတ်မိသွားခဲ့တာပါ..၊ တကယ့်ကို two thumbs up ပါပဲ ညီမရေ...။
မနှင်းပွင့် အစန်း ကျေးဇူးပါ။ အဲဒါ ဘာသာပြန်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်ရေးပါ။
ေေ အဟီး ။ ကိုညီလင်း ကျေးဇူးအထူးပါ အားပေးတဲ့အတွက် ။
ကိုယ်တိုင်ရေးဟုတ်လား ။ So impressive !! ဘာသာပြန်ထင်လို့လိုင်းတူလူတစ်ယောက်တွေ့ပြီထင်နေတာ ။ even better ! The story was impeccable. Lemme share it on my FB. Thanks !!
ဟုတ်မနှင်းပွင့် ကျနော်က ဘာသာပြန်လည်းရေးပါတယ် ဘာသာပြန်ရင် မူရင်းစာအုပ်နာမည်နဲ့ စာရေးသူကို အောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်
N-y Na- Says:
အင်း..ဒီလိုအရေးအသားနဲ့တော့ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်တော့မယ် ။ များများရေးနော် ။
အရမ်းသဘောကျတယ်။ နွဲ့ ရီရော အမ်နျူရယ်လ်ရောဖတ်သွားတယ်။ ဂွတ်ဂျော့ဘ်။း)